Single Mother “Hooyada Masuuliyiddii Caruurta ku keliyoowdey” Qiso ay ka sheekeyneyso hooyadii ay ku dhacdey. - iftineducation.com
iftineducation.com – Heesta Amina Mussa Wehelie ee Single Mother “Hooyada Masuuliyiddii Caruurta ku keliyoowdey” oo ay Ilmaha aabohood kala tageen loogu magac daray waxay Caawa i soo xasuusiyey noloshii Qaxarka badneyd ee aan ka soo marey Single Mother-nimada!
Mid ka mid ah qisooyinkaan ka soo marey illa qeybsada oo aan isleeyahay waa mid wax u tareysa gabadhaha hadda ah single Mother ah kuna nool wadamadaa Reer Galbeedka .
Xaqiiqan waa nolol aad u adag waana calaf dhamaadey oo maahan mid Qof gooni dusha laga saarayo Hooyada ama aabaha!
Waloow ragga ay kaalintooda gabaan markii calafka dhamaado intooda badan!
Waxaan ahaa 22 jir afar Caruur ah haysta sedex Wiil iyo hal gabar.6.5.3 iyo 8 bilood !
Waxaan ahaa ardayad dhigata Colege sanadkii ugu danbeeyey oo waxaan dhiga naayey anoo uur leh iyo anigoo ummulba ahba !
Markii ay reeraha kala tagaan waxaa jirta inay dagaal cir iyo dhulba ah iyo la xisaabtan aan hore loo arag ay ku soo qaadaan hay’adaha u qaabilsan xuquuqda caruurta! Waxaana ay ka bilaabataa iskoolada iyo xanaadaha caruurta macaliintooda oo inta badan caruurta ku tilmaama kuwo Qatar ku ah ardeyda kale ,mustaqbalkooda noqonaya mid Mugdi ah haddaan ilmahaa uusan helin caawimaad !
Inta aanan caruurta aabahood kala tagin waxaan xanaanada iyo iskoolkaba ka ahaa hooyo yar oo wanaagsan oo karti badan wax baratey si fiicana u dhex gashey swedishka ! Waxay iigu yeeri jireen ” Lilla Mor” oo macnaheeda yahay HOOYADII YAREYD!
Labo maalin markaan keligeey caruurtii kala geeyey iskoolkii iyo xanaanadii caruurta ayaa la i weydiiyey aawey aabahood?
Waanu kala tagney ayaan ku dhahay!
Maalintii sedexaad college ka ayaa layga soo wacay ,weligeeyna layma soo wacin macalimadii xanaanada oo qaabilsaneyd caruurteeyda i soo wacdey !
Waan xasuustaa imtixaan ayaan ku jirey
Waxay haddal iiga biloodey wiilka wiilashaada u yar waa sedex jirka ayaa derbigii xanaanada oo dhan wada fiiqeyee sida ugu dhaqsiyaha badan u soo doono caruurtaada kan maaha mid Maskaxda ka fayoow!
Derbiyada dalkaa waxaa ku dhegen waraaqo qafiif ah oo sharaxan!
Waxaan ugu jawaabey halkii aan welwel iyo Naxdin ka muujin lahaa ,anoo diyaar u ahaa dagaalkaa ka dhanka ah single motherta ileyn naag sharciyada dalkooda la qabsatoo wax uun ka taqaan ayaan ahaaye “ADIGA MAXAAD QABANEEYSEY INTA UU 1KM OO ISKU WAREEG AH UU DERBIYADOODA FIIQAYEY 3 JIRKA?!
QEYRUL MASUUL BAAD TAHAY WAANA INAAN KAA DACWEEYA XAFIISKA LAGAA XUKUMO MANA AHID MID U QALANTA IN LAGU AAMINO MASUULIYAD CARUUR DA’DAA JIRTA (waa inta ay rabto inay Aniga igu soo oogto)waa igu hormarey ! Waxaan u raaciyey MA KA SOO TAGAAYO WAXBARASHADEEYDA ILLAA LAGA GAARO 10 SAAC GALABTA WAQTIGAAN SOO KAXEEYSAN JIREY! KA HOR HADDEEY WAX GAARAAN ADIGAA MASUULIYADEEDA ISKA LEH ILMAHEEYGA?!
Naagtii telka ayay igu damisey iyadoo naxsan!!! halkeey Aniga qeyrul masuulnimo aan ahayn iigu saarin lahayd iyadaan dusha ka saarey!
Waxaa noo biloowdey Aniga iyo iyada dagaal ,Waan dacweeyey waxba lagama qaadin keliya degniin ayaa la siiyey!
Waa soomaaligii ugu horeeyey oo DACWEEYA macalimad waa ay qaadan weeysey!
Waxay wiilkii yaraa ka qortey Buug dhan oo ay iyada sameeysatey oo been abuur ah kuna qeexeeyso in canugeeyga si maskixiyan ah u xanuunsan yahay iyo inaan caruurtaa aabahood ka tagay aan masuuliyadooda qaadi Karin si layga qaato caruurta dhamaan! Ujeedkeeda ayaaba intaa ah! Waase sirantey markaan!
Waxaan ku dhahay reporter kastaa aad ka qortaa caruurteeyda ii soo dir copygiisa!
Waa mid aan xaq u leeyahay, waalidkastaana Xaq ayuu u leeyahay inuu helo dacwad kastaa oo caruurtooda laga qoraayo copy-gooda sikastaa mana diidi karto!
3 jirkii ayay waxay dhahdey wuxuu noqonayaa dilaa “Mördare”Markuu weynaado haddaadanan nolosha uu hadda ku koraayo oo ah hooyadaan aan masuulayadiisa qaadi Karin laga wadin oo laga fogeeyn ! WAXAY muujisey welwel aad u daran oo wiilkeyga ku aadan oo aan waxba ka jirin! WAXAY iska dhigtey mid ka taxadireeyso koriinshaha wiilkeeyga !Intaa waxa ay u sameysey sidee dhoocil soomaali ah kuu dacweeysey! Iyo sharcigooda oo ah inla soo hujuumo hooyadaa kelida ah!
Markaan buugii aqristey oo aan sedder kastaa jawaabtiisa oo waafi ah meel ku qortey oo aan anna Buug kale qortey oo lid ku ah buugeeda ayaa dhaqtarka Maskaxda caruurta” specialist Barnspykaitri laynagu balamiyey!
Markii kulankii noo biloowdey Aniga ,naagtii macalimad ahayd iyo Dhaqtarkii iyo wiilkeeyga ayaan ku dhahay wareysiga iyo baaritaanka wiilkeeyga iyo Aniga nagu Aadan ka hor waxaan rabaa inuu wiilkeeyga qolka laga saaro oo markii aad u baahato laguugu yeero ! Dhaqtarkii wuu yaabey oo igu dhahdey waa inaan wiilka la hadlaa si aan u ogaado in jirada laga sheegaayo ay xaqiiq tahay! Adugana kaa wareeyato bal habkaad u koriso!
Waxaan ku dhahay dabcan waa waxa aan halkaan u nimid lkn marka hore waa inaan ogaadaa Ninka “främmande” igu ah oo aan aqoonin oo aan Xaalada wiilkeyga kala hadlayaa Qofka uu yahay ! Wiilkeeygii debada ayaa lagu haayey inta aan iska baraneeyney dhaqtarka !
Waxaan ku dhahay waxaad ii sheegtaa qofka aad tahay ,iiga shekeey noloshaada adigoo mahadsan si aan isku barano !
Heblaayo waan isnaqaanaa Adigana aan isbaro e!
Magaciisa iyo waxbarashiida iyo noloshiisa private ah ayuu iiga sheekeeyey isagoo iiga Mahad celiyey inaan ilmihii yaraa banaanka u sarey Noloshiisa foolxumeed darteed !Markuu igu yiri hooyadeey iyo aabaheey waxay kala tageen Aniga oo 4 jir ah ,Aabaheey alkoliste ayuu ahaa, Hooyadeeyna ku kala tageen qamrigaa uu u go’ay ayay inteey xamiliweeysey iyana cidladii Sidoo kale ayay qamriya Cab noqotey! Waa layga qaatey oo
Waxaan ku soo korey fosterhem ” foster home” waa calool xumeyd nolosha aan ku soo korey! Waxaa iigu dareyd ayuu dhahay Markii uu i kufsadey aabihii Foster Familj ii ahaa ,Wuu isbadaley gebigiisaba xusuusteyna murugodii uu ku soo korey !inta badan waa la kufsadaa caruurtaa oo Dadka loo geeyey ayaa isticmaala!
Waxa uu iigu soo gabagabeeyey hadda waxaan ahay dhaqtar caruurta ! Waxaana u dalbadey inaan barto maadadaan si aan u caawiyo caruurta nolosha sideeydoo kale ku soo kortay!
Waxaan ku dhahay ooh runtii waan ka qiiroodey taariidaadii koobneyd, qalbiga mar hadduu sidaa u dhaawacmana waa ay adag tahay dhayidiisa oo sahal kuma bugsoodo qofkana wuu xambaarsanaanaa xanuunkaa weligii !!marka adiga ayaanan aheyn mid maskaxiyan u fayoow snälla caafimaad ayaad u baahan tahay koow dheh!
Labo Cidiyahaaga Wasaqda ku jirto markaan arkey ayaan dareemey inay nolol adag kaa danbeeysey ! marka sidaa la’adligeed ma ahid midkaan kala hadli lahaa caafimaadka wiilkeyga, raalina iga noqo masuulida canugaa yar oo denbi laawahaa anigeey i saaran tahay not adiga iyo islaantaanba ! Waana inaan ka taxadiraa cidaan kala hadlaayo noloshiisa! Wiilkeeyga wuxuu haystaa hooyo aan balwad lahayn,jaceyl waalidnimo ka haqabtirtey,nolol fiicana wuu nool yahay. information qalad ah lagu soo siiyey !WAXBA MAANAN DHOOWRAN ANIGA WAAYOO WAX II MICIINAA MA HAYSAN AMA GARABKEEYGA TAAGNAA ! Iyadiina Waa Macalimadii (dags fröken) waxaan ku dhahay ha ka Daalin been abuurka wiilkeeyga anna ka Daaali maayo illaa shaqada aan kaa buriyo soona bandhigo qaladaadkaaga ku Aadan masuuliyada aad mushaarka ku qaadato oo aad mar hore gabtey! (Waan aruriyey cadeeymo ku filan dacwadaada been abuurka ah) Wiilkeeygana waxaan u balansanaayaa dhaqtar privite ah anoo hubo inuu 100% fayoow yahay, ayaan misana dhaqtarkaa u qabanayaa si aan uga daba tago been abuurkaaga kuna leeyahay ka qor waxaad ku aragto wiilkaa si fiicana iigu baar ! Haddeey islahaan waayaan labadaa warbixinood ismaba lahaadoonaanee! Buugaagan aad soo alifatey waxa ku qoran (på hittat-ka) ah iyo warbixinta dhaqtarka Adigaan maxkamad kula koraayaa ! Ilmahaad waalida ku tilmaantey Magdhowgiisa ayaad dhiibeeysaa! Masuuliyadii shaqo iyo kalsoonidii cidkastaa kuu haysey waad ku weyndoontaa!
Waana ka soo dhaqaaqey!
Waxay noqotey inay ayaddii cabsi gasho oo ay ka shalaaydo cadowtinimadii ay nala rabtey Aniga iyo caruurteeyda aan waxba galabsan!
Waxay goaansatey inay i raali gareeyso maalmo dib igana barido inaannan sii dacwoon!
Maalintaa ayaa iigu danbeeysey xaaraanta Ilmaha Dadka kaga qaata dacwad aan jirin in ay igula soo saqajaamaan waxaan jirin!
Sedex jirkii Markuu dugsiga sare dhameeyey ee uu ku baasey natiijo aad u fiican isla markiina uu bilaabey Jaamacad 18 jir isagoo ah Farxad ayaan wiilkeeygii iyo dadkii maalintaa xafladaa ila joogey hortooda oohin is celin waayey! Wiilkeeygii iyo intii ii dhaweydna ila ooyeen!
Odeygii weli sidii ayuu uga maqan yahay reerka!
Waxaan go’aansadey inaan raadiyo Macalimadii iyo Dhaqtarkii si aan ugu bishaareeyo heerka uu wiilkeeygii gaarey!
Si dhaqtarkaa uu u ogaado in dacwadaha qaar ay been abuur yihiin, ugana feeljignaado dacwadaha qaar!
Naagtii Macalimada ahaydna aysan dib danbe ugu soo shaqajaamin hooyo soomaaliyeed oo single motherta ! ayaa waxaan u post -gareeyey Natiijadii wiilkeeyga ku baasey iyo warqadii jaamacada ku ogolaatey inuu ku bilaabo isagoon hal mar iskoolka ka saaqidin wax danbi ahna Liiska u galin ! Oon u raaciyey su’aal ahayd aawey wiilkii mördare, dilaaga noqon lahaa ?! Ilaa iyo hadda wax jawaab ah kama helin!
Märka Hooyada Soimaaliyed xilkaa culus oo kelinimada ah waxaa u dheer welwelka iyo walbahaarka ay kala kulmeeyso dadgoowgaa Shisheeye!
Illaah ha xafido dhamaan single motherta meelkastoo ay joogto iyada iyo caruurtoodaba!
Noqda kuwo geesiyaal ah oo ubadkooda YUR ka yiraah waraabayaasha .asturana ceebta raggii ka dhalay caruurta oo aan meelaha ku soo qorqorin kuna caayin !
Bartana sharciyada qeexaya Wixii aad Xaq u leedahiin iyo waxaadan Xaq u lahaynba!
Sharciyada ku aadan denbiyada ilamaha layskaga qaato oo qeyrul masuulnimada ah ee u yaalo dalalka aad joogtaan Una yaalo hay’daha u dooda xaquuqda caruurta ,si aad xog ogaal ugu ahaatan QODOB KASTAA IYO WUXUU LEEYAHAYBA ! si aad iskala doodaan kuwa Dantooda tahay inay caruurta idinka kaxeeystaan dhaqan iyo diinba roggaan !
Waxaa Qortey Barlin Cadaawe